Laptop chaarjii irra godhanii faayyadamuun Baatirii ni miidhaa? | OROMIASAMSUNG
Laptop chaarjii irra godhanii faayyadamuun Baatirii ni miidhaa?
By abdulwasi	 On Oct 18, 2020 1,608 4
Baatiriin Laptoppii qaamolee barbaachisoo Laaptoppii keessaa isa tokko dha. Garuu namoonni baay’een yeroo Laptoppii bitan dandeettii kompiitarichaa, RAM fi CPU malee waa’ee baatirii isaaf yogguu xiyyeeffannaa kennan hin mul’atu.
Yeroo Laptoppii faayyadamnu chaarjii itti goonee faayyadamuu moo erga chaarjiin Laptopichaa dhumee chaarjiitti gochuu wayya?
Deebiin gaaffii kanaa salphaa waan hin taaneef, Deebii isaa salphaatti hubachuuf waa’ee Baatirii Laptop haa ilaallu.
Baay’inaan baatirii Laptoppii “Liitiyeem Ayoon” ykn “Liitiyeem pilaaymer” irraa kan hojjataman yoo tahu, Baatiroonni Laaptoppii kuniis hanga isaan barbaachisuutii ol chaarjii akka hin fudhanne tahanii kan dalagamaniidha. kanaafuu, baatiriin Laaptoppii yeroo tokko 100% erga guutee booda chaarjii irra osoo jiruu chaarjii fudhachuu dhaaba. Kanaafuu guyyaa guutuu Laaptoppii chaarjiirra osoo keenyee, erga yeroo tokko 100% guutee booda waan chaarjii hin fudhanneef baatirii Laaptoppii keenya hin miidhu.
Laaptoppii chaarjiitti godhanii dafanii irraa fuudhuun dandeettii baatirii Laaptoppichaa ni miidha. kanaafuu, Laaptoppin keenya chaarjii hanga guututti irraa buqqisuu dhabuun gaaridha. Erga guutee booda irra yoo ture Baatirii keenya miidhuu dhabuus, Elektirikiin waan wal qabatuuf nageenyaf jecha yoo irraa buqqisne ni gorfama.
Farra Baatirii Laptop
Farra baatirii Laptoppii kanneen jedhaman keessaa tokko Laptoppiin baay’ee hoo’uu akka tahe ni dubbatama. Hoo’insi Laaptoppii daangaa darbe sababoota umrii baatirii laaptoppii hir’isan keessaa isa tokkoodha.
Hoo’insi Laaptoppii 40°C (afurtama digirii sentigireedii) yoo tahe itti faayyadamuun rakkoo hin qabu, Garuu hoo’insi isaa kanarra yoo darbe faayyadamuu dhiisuutu gorfama. yoo baatiriin Laaptopichaa kan irraa bahu tahe immoo yeroo baay’ee hoo’u, baatirii keessaa baasuun itti deebisuun faayyadamuun filatamaadha.
Mana suphaa mobaayilaa banachuuf meeshaalee barbaachisan 14
Tokuma says 12 months ago
Baay’ee galatoomi. Garuu, gaaffii tokkoon qaba. Innis laptop’n kiyya yeroo hunda online fayyadama baatirii waan hin qusanneef jechuun at maximum sa’aatii 1 tursiisa. Kanarras kan ka’e banee daqiiqaa muraasan booda hoo’uu eegala. Xiqqoo turees sagalee wayii dhageessisa. Akkuma itti fayyadama itti fufeen ammoo hoo’insis sagaleenis dabalaa deema. Hanga nama gubuutti deema. Kanaaf falli maalidha mee natti himi.
Mustefa says 12 months ago
Galatoomi waa baay’ee irraa hubadhe jabaadhu haaluma kanaan itti fuufi,
Laptop cufee yeroo deebisee banu ariitiin isaa dadhabaadha maal gochuu qaba?
Diriba Regasa says 11 months ago
isiin walin jirra jabaadha
Yuya says 7 months ago
Laptop kiyya Dell modela 2016ti
Ani battery Irraa baasee online chaarjii irratti game taphachaa jiruu Ibsaan badee osoo hin turin deebie. Kana booda laptopin koo naaf qabachuu dide, mana suphaa geesseen naaf qabate. Garuu hanga ammaan tanaatti battery itti galchuus chaarjiis hin fudhachisu battery n naaf hin hojjatu. Battery jijjiirees sanuma mee furmaata waan kanaa naaf himaa ?